Lixesha lokuba ubeke Ubuso bakho beMfazwe | Martech Zone
Lixesha lokuba Wanxibe uBuso bakho beMfazwe
NgoMgqibelo, Disemba 20, 2008 NgeCawa, Meyi 29, 2016 Douglas Karr
Kukho umahluko phakathi komntu wentengiso kunye nokusondela. Ndiyakholelwa ukuba ndilungile umthengisi, kodwa eyoyikekayo ku futshane. Ndiyazi ukuba ndithengise uninzi lokuzibandakanya okukhulu, kodwa andizanga ndibengumntu oyifunayo inki (ukusayinwa kwesivumelwano). Andikonwabeli ukutyhalela emva kubungakanani bekhontrakthi okanye ukufaka uxinzelelo kwithemba lokutyikitya kwangaphambili. Ngombulelo, ndingqongwe yitalente emsebenzini wam onwabela loo mathuba.
Abavaleli bethu banakho ukuwamkela ngokukhawuleza amathuba kunye nomthengi, izibonelelo zesicelo sethu, kwaye basebenzise uxinzelelo oluyimfuneko ukugqibezela intengiso. Oko kunokuvakala ngathi kukukhohlisa- ndiyavuma ukuba khange ndicinge ukuba siyitshintsha ngokwenene impumelelo yabathengi bethu.
Sichonge ukuba ukubandakanyeka kokukhulu kunye nokukhawuleza okuqala, ngokukhawuleza imbuyekezo yotyalo-mali kumthengi wethu-ke sonwabile sobabini kwixesha elide. Sichonge okuchaseneyo-abathengi bethu abancinci bafuna zombini ezona ngqwalaselo kwaye iziphumo azizukuza kwakamsinyane. Umthengi omkhulu unokubona ixabiso kwiiveki, umthengi omncinci angathatha iinyanga.
Ngobunzima boqoqosho olugcweleyo kuthi, sicelwa umngeni ziinkampani ezineedola zokuvala unyaka, kodwa kunyanzelekile ukuba sinyanzelwe ukuba zisithembe ngotyalo-mali lwazo. Iinkampani kunokuba zichithe konke konke kwaye zibeke emngciphekweni ukukhula ngaphandle kokuchitha imali kunye nethuba lokulahleka.
Kulapho ufuna i ku futshane. Ukusondela akwenzi usike amaxabiso ukufumana intengiso, banxiba eyabo ubuso bemfazwe kwaye ucelomngeni kwithemba lokuvala intengiso.
Kule veki ndiyibonile isebenza. Sisebenze nethemba lokuba ngubani oza kuthi axhamle kwiqonga lethu lokubloga, kodwa beberhuqa iinyawo xa besayina. Ubungakanani bekhontrakthi liqhezu lohlahlo-lwabiwo mali xa iyonke kungangombono-wobuchopho. Imbuyekezo kutyalo-mali iya kuba ngaphezulu kwamaxesha amaninzi kunenye imizamo.
Ukusondela kwethu kuye ubuso bemfazwe waya edabini. Waphanda isicwangciso-qhinga sabo sangoku kwaye wakhumbuza ithemba lokuba sele betyale ixesha elininzi kunye namandla kwisicwangciso esingakhange sibazisele ziphumo… nada… kwaye besingumahluko. Ukusondela kushiye incoko ngombuzo ofanelekileyo, "Ngaba unqwenela ukuqhubeka nesicwangciso sakho esingaphumeleli, okanye utyalomali kwisicwangciso sokuphumelela nathi?". Vala!
Kuvakala kunzima, kodwa la ngamaxesha anzima. Iinkampani zichitha uhlahlo-lwabiwo mali luka-2008 okwangoku ukuze ubekeke ukuba ukuthengisa kuza ngendlela yakho kwaye ukudodobala ayisiyonto inkulu.
Ngo-2009, kungcono ubeke ubuso bakho bemfazwe kuba kuya kufuneka ulwele uhlahlo-lwabiwo mali olungenakubakho! Qiniseka ukuba uqesha abantu abasondeleyo- hayi abathengisi- kwaye unokuphuma ungenzakalanga. Italente yabasebenzi bethu bokuthengisa yinxalenye enkulu yezinto ezityhala ukukhula kwethu kwirekhodi ngoku kwaye iya kusinika ukukhula okuqhubekayo ngo-2009.
tags: kuvalwaibhatyi yesinyithi epheleleyoithembaunxibelelwano lokuthengisaUkunika amandla ukuthengisaubuso bemfazwe
Ngaba iGoogle Cookie iyawa?
Ukuthengisa kwiNtengiso yeNdawo yokuThengisa izindlu
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-12: 38 AM
Mhlawumbi kunokuba kuhle ukuba kufakwe isikrweqe somzimba ngokuchasene nobuso bemfazwe obuya koyikisa abathengi. Ukuvala akufuneki kube buhlungu kumthengi.
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-12: 49 AM
Izixhobo zomzimba azizukunceda ukuvala ukuthengisa, i-SBM! Andifuni ukuba noloyiko okanye ukoyikisa. Uloyiko luyimvakalelo yokukhubazeka-ngakumbi kumashishini.
Ngokuchasene noko, ndifuna ukuba baqinisekiswe. Ingxaki esiyibonayo koluqoqosho kukuba amashishini abambe umva-nokuba yeyona nto inomdla wokuqhubela phambili. Ukuthengisa kufuneka kulwe nalo loyiko.
Ndiyabulela ngokungongeza incoko.
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-4: 04 PM
Gosh kulungile ukuva umntu ethetha malunga neshishini kwilizwe eliyinyani. Yonke into endiyivayo yi-Twitter le, kwaye i-FriendFeed leyo, kunye nokuthengisa ngewebhusayithi yeendaba zentlalo. Ndinike ikhefu, uninzi lwabanini bamashishini baxakeke kakhulu kwi-Twitter, njengeenkampani ezinemveliso oza kuyithengisa, kuya kufuneka uyiqonde inkqubo yokuthengisa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, kwaye oko kubandakanya ukuvala, kunye nokuvala bubugcisa, apho ungoyiki. Khumbula, okona kubi banokukuthi hayi, kwaye yeyona nto iphantse yasondela ku-YES !!!!
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-4: 28 PM
Enkosi uPreston! Unyanisile-imalunga nokutyala ezona zixhobo zibalaseleyo apho zifuneka kakhulu.
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-6: 08 PM
Umbuzo wam kuzo zonke iigurus zentengiso ngaphandle kwabo kubandakanya uSeth Godin yintoni enokwenziwa ukuthengisa imveliso yakho eya kuthi ifikelele kumashishini amancinci ukuya kubukhulu obuphakathi? Ngoku, mandikunike imvelaphi ethile kum, ndisebenze kwiShishini leeNkonzo zezeMali malunga neminyaka eli-17 kwi-NYC. Umsebenzi wam ibikukunyusa imali kwaye ndiyilawule. Ndiphakamise izigidi ezilawulwayo ngeendlela ezimbini: Iisemina zokubamba zabatyali mali, kunye nabaphathi beenkampani ezithengisa esidlangalaleni. I-akhawunti yam enkulu yayiyi-45 mil… akukho mntwana. Ngoku, ndinenkampani yoyilo lwewebhu eyila iisayithi ezibiza malunga ne- $ 3,000 nangaphezulu. Ingayintoni ingcebiso enokundenza ukuba ndidibane kwaye ndivale abanini bamashishini abaninzi? Ndizamile ukuhlawula ngonqakrazo ngalunye, alunamsebenzi. Inethiwekhi yemidiya yokuncokola… ewe kunjalo, yile nto ndiyibiza ngokuba nguG ukuya ku-G (Guru ukuya kuGugu). Ukubizwa kobandayo kuzise phantse bonke abathengi bam, ngaphandle kwegama lomlomo. Ndinike isilingi esitsha esitsha….
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-6: 14 PM
Yhu, nceda uxolise "yabo" typo… kufuneka ibekhona